Madal cusub oo looga dhawaaqay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Madal cusub oo looga dhawaaqay Muqdisho
Waxaa dhawaan magaalada Muqdisho looga dhawaaqay madal siyaasadeed cusub oo ay ku mideysan yihiin Maamullada Puntland, iyo Jubbaland, Midawga Musharixiinta iyo Midawga Siyaasiyiinta Somaliland.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kadib kulan maanta ka dhacay Xerada Xalane ee Magaalada Muqdisho, oo u dhaxeeyay Madaxweynayaasha maamuladda Puntland iyo Jubbaland, Musharixiinta iyo Midawga Siyaasiyiinta Somaliland ayaa dhidibada loogu taagay Madal cusub.
Madashaan waxaa loogu magac daray Madasha Badbaado Qaran, waxaana waajibaakeeda lagu sheegay ka shaqeynta sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho xalaal ah, oo la isla wada ogol yahay.
Isbaheysigaan cusub, sida la sheegay waxaa loo yagleelay inuu ka hor tago fashil siyaasadeed oo dalka ka dhaca iyo in qolo gooni ah marooqsato awoodda dalka.
Gudoomiyaha Aqalka sare Cabdi Xaashi ayaa loo doortay Gudoomiyaha madashan cusub, halka ku xigeenadiisu yihiin Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Axmed Madoobe iyo Siciid Deni.
Waxa ay Farmaajo ku eedeeyeen uu masuul ka yahay in aan wali la fulin heshiiskii 17-kii September Muqdisho lagu gaaray iyo fashilkii shirkii Dhuusamareb 4.
Waxay shegeen in Farmaajo is hor istaag ku sameeyay Shir wadatashi qaran oo Muqdisho ka dhaca, isla markaana uu amaray in la laayo Madax iyo shacab Soomaaliyeed 19-kii bishii hore.